Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha uye Mavhidhiyo kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo | IPhone nhau
Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha uye Mavhidhiyo kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo
Makore mashoma apfuura, Apple yakajoinha iyo Dhata Yekutamisa chirongwa, chirongwa chakagadzirirwa kuitira kuti vashandisi vagone kusunungura dhata ravo kuenda kune zvimwe zvisikwa. Mune chirongwa ichi, kuwedzera kuApple, tinowanawo Google, Facebook, Microsoft neTwitter. Yakanaka kune vashandisi.
Kubva ipapo, mazhinji emakambani aya akatanga kubvumira zvemukati kuendeswa kunze kana kurodha pasi zvakananga kumakomputa evashandisi. Panyaya iyi, Apple ichangobva kuzivisa chinhu chitsva, chinhu chitsva chinotendera vashandisi teedzera ese mafoto uye mavhidhiyo akachengetwa muICloud kuGoogle Mifananidzo.
Ichi chiitiko chitsva inowanikwa mukati zvese zveEurope, United States, United Kingdom, New Zealand, Iceland, Switzerland, Norway neLiechtenstein uye hazvidzime zvirimo zvakachengetwa muICloud, zvinongogadzira kopi muGoogle Mifananidzo.
1 Kopa mifananidzo nemavhidhiyo kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo
2 Ndezvipi zvirimo zvinotamiswa?
3 Izvi zvinotora nguva yakareba sei?
Kopa mifananidzo nemavhidhiyo kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita tinya pane izvi link, isu tinofanirwa kupi pinda iyo data yeApple account yedu.
Muchikamu Chinjana kopi yedata rako, tinya Kumbira kuendesa kopi yedata rako.
Ipapo zvicharatidza iyo yakazara nzvimbo inotorwa nemapikicha edu uye mavhidhiyo. Muchikamu Sarudza kwaunoda kuendesa mapikicha ako, tinya pane kudonha uye sarudza Google Mifananidzo (panguva ino hapana zvimwe zvingasarudzika senge OneDrive yeMicrosoft).
Pakupedzisira, isu tinosarudza mhando yezvinyorwa iyo yatinoda kuteedzera: Mifananidzo uye / kana Mavhidhiyo.
Muchikamu chinotevera, iwe unotiudza izvozvo isu tinofanirwa kuve nenzvimbo yakakwana yekuchengetera muGoogle Mifananidzo kukwanisa kutevedzera, zvikasadaro zvese zvirimo hazviteedzerwe.
Mune inotevera nhanho, isu tinopinda iyo data ye iyo Google account kwatinoda kuita kopi chengetedzo yezvose zvirimo zviripo muICloud. Tevere, isu tinofanirwa kupa Apple Dhata uye Yakavanzika mvumo yekuwedzera izvo zvirimo kuGoogle Mifananidzo.
Nhanho yekupedzisira inotikoka isu simbisa kuti tinoda kuendesa yezvose zvirimo zviripo muICloud izvo zvatakasarudza kuGoogle Mifananidzo.
Ndezvipi zvirimo zvinotamiswa?
Smart albam, mapikicha epamoyo, zvemukati zvekutepfenyura zvemukati, mamwe metadata, uye mamwe mafoto eRAW haigone kuendeswa, asi mafomati senge .jpg, .png, .webp, .gif, mamwe mafaira eRAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts uye .mkv zvinowirirana neiyi kopi system.
Izvi zvinotora nguva yakareba sei?
Maitiro aya anogona kutora kubva Mazuva mashanu kusvika makumi matatu. Kana yapera, tinogashira yekusimbisa meseji kubva kuemail account yedu inosangana neApple ID.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha uye Mavhidhiyo kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo
iOS 14.5 ichakudzivirira kubva pakuongororwa neAirTag kana zvimwe zvakafanana
Pfungwa ye 8,9-inch iPad mini Pro